Ziso raMwari Chirairo - Zvidhori Maitiro Maitiro
Ziso raMwari Tora
sonitattoo January 26, 2017
1. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chinoita kuti munhu aonekwe zvakasimba
Varume vemaBrada vanovada Ziso raMwari. iyi tambo yakagadzirwa nebhuruu uye ruvara rwebhuruki inopenya inoratidzira ruvara rweganda kuti rutevedze
2. Ziso raMwari Takattoo yevarume vane bhandi inki inoita kuti vaoneke zvinoshamisa
Varume vanoda kutarisa zvinoshamisa vachada Ziso raMwari Mavara pazhe rezasi neine bhuru rakaiswa
3. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chepamberi chemaoko chinoita kuti zvinhu zvionekwe
Varume vanoda Ziso raMwari Tora pamushana wavo wezasi neine inki yakaumbwa; iyi chimiro chemavara chinoita kuti vaite sevanokurudzira uye vakanaka
4. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chepamusoro chinoita kuti munhu atarisire zvakasimba
Varume veBrawn vanoda Ziso raMwari. iyi tambo yakagadzirwa nemukati wemainki inofananidza ganda reganda kuti rive rakanaka
5. Ziso raMwari Chiratidzo chekunyora chimiro paruoko chinoita kuti munhu aone seanotonhora
Varume vanoda Ziso raMwari Zvidhori pamaoko sezvo zvinoita kuti zvionekwe sezvipfeko uye zvakashata
6. Kuchena Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chinoita kuti munhu aone kutarisa
Varume vemaBrazil vachaenda kune inki yakasikwa Iso raMwari Rinofananidza pamaoko avo; ichi chimiro chekufananidza chinowirirana nemuvara weganda remuviri kuti uuye nekunakidza uye kutarisa kwechikoro
7. Ziso raMwari Takattoo yevarume vane rima inogadzirwa inoita kuti munhu aoneke akanaka
Varume vemaBrawuni vanowanzoenda kune Ziso raMwari. iyi mifananidzo yakagadzirwa inoita kuti vatarise uye vakanaka
8. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chepamusoro chinoita kuti munhu ave nehu hunky
Varume vanoda kuve neZiso raMwari Tato pamatanda avo. Izvi zvinoratidzira zviratidzo zvinoratidza hupenyu hwavo hunky.
9. Ziso raMwari Chiratidzo chemuti wepamusoro chinoita kuti varume vaonekwe zvakanaka
Varume vanoda Ziso raMwari Tora pamusoro wepamusoro kuti uratidze zvakasikwa
10. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chemukati chinokonzera munhu kutarisa
Varume vemaBrada vanoda Ziso raMwari. ichi chinyorwa chinogadzirwa nemuvara wemainki chinomirira ruvara rweganda kuti ruite kuti ruve rwakanaka
11. Ziso raMwari Chiratidzo chine ruoko chinoita kuti munhu aone kutarisa
Varume vemaBrawn vachaenda kune bhuru rakaiswa maziso Ziso raMwari Vakatora pamaoko avo; ichi chimiro chekufananidza chinowirirana nemuvara weganda remuviri kuti uuye nekunakidza uye kutarisa kwechikoro
12. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati kuruoko rworuboshwe chinoita kuti munhu ave nekutarisa
Varume vazhinji vanoenda kune Ziso raMwari Tato pamutsara kuruboshwe kuti vauye kutarisa kwavo
13. Ziso raMwari Takattoo nekasi inki yakagadzirwa pamusara wezasi inoratidzira maonero avo
Varume vanoda Ziso raMwari Tato nekisi yakaita seni pamaoko ezasi echanza. Izvi zvinopa chimiro chemurume
14. Kuchena Ziso raMwari Kutora maitiro ekugadzira pfungwa yevakomana
Varume vachada Ziso raMwari Tato pamakumbo avo neinki yakagadzirwa. Izvi zvinyorwa zvinoratidzira zvinounza kutaridzika kwavo
15. Vanhu vanoita Ziso raMwari Tato pamapfudzi avo kuti vazviite
Vanhu vanoita Ziso raMwari Mavara pamapfudzi nemabhawuni ebhenji kuitira kuti zvive chinhu chinokwezva kuvanhu
16. Ziso raMwari Chiratidzo chevarume vane ruvara rakagadzirwa pa bicep vanoita kuti vatarise zvakanaka
Varume vanoda Ziso raMwari Mavara kune varume vane maruva maitiro pa bicep; iyi mifananidzo yakaita kuti vatarise zvakanaka
17. Ziso raMwari Kutora nebhuruu inki yakagadzirwa kunoita kuti munhu aone kutamba
Varume veBrown vanoenda kune bhuruu yebhuruu inki yakagadzirwa Ziso raMwari Vakatora pamaoko avo ari kumusoro; iyi mifananidzo yakaita kuti vatarise uye vakanaka
18. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chepamberi chemaoko chinoita kuti zvinhu zvionekwe
Varume vanoda Ziso raMwari Tato pamatanda avo ezasi; iyi chimiro chemavara chinoita kuti vaite sevanokurudzira uye vakanaka
19. Ziso raMwari Tora pane ruoko rworuboshwe, ita kuti vanhu vatarise zvakanyanya
Varume vachaita Ziso raMwari Mavara ekunyora kuruoko rworuboshwe kuti atore pfungwa dzevanhu
20. Ziso raMwari Chiratidzo chine ruoko chinoita kuti munhu aone kutarisa
Varume vemaBrawoni vachaenda kune machenje uye machena machina maziso Ziso raMwari Vakatora pamaoko avo; ichi chimiro chekufananidza chinowirirana nemuvara weganda remuviri kuti uuye nekunakidza uye kutarisa kwechikoro
21. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chinounza dapper kutarisa mumurume
Varume vane ruvara rwebhuvara rune ruvara vanoda Ziso raMwari. iyi mifananidzo yekutema inounza dapper kutarisa
22. Ziso raMwari Chiratidzo chevarume vane bhuruu inogadzirwa inoita kuti vatarise zvinoshamisa
Varume vanoda kutarisa zvinoshamisa vachada Ziso raMwari Takattoo yevarume vane bhuruu yeinki pamaoko avo ari kumusoro
23. Ziso raMwari Chiratidzo chemukati chepamusoro chinoita kuti munhu ave nehu hunky
Varume vanoda kuve neZiso raMwari Tato pamatanda avo. Izvi zvinyorwa zvinoratidzira zvinoratidza hunky uye hunyengeri.
24. Ziso raMwari Chiratidzo chemuti wepamusoro chinoita kuti munhu atarise
Varume vemaBrada vanoda Ziso raMwari Zvinyorwa pamusoro wepamusoro; iyi tambo yakagadzirwa nemukati wemainki inofananidza ganda reganda kuti rive rakanaka
Geometric Tattoosinfinity tattoochifuva tattoosmimhanzi tattoosmaoko tattooswatercolor tattoohanzvadzi tattooscherry blossom tattookoi fish tattooneck tattoosangel tattoosHeart Tattoosbutterfly tattoosarm tattoosback tattoosarrow tattootattoo ideassleeve tattooszuva tattoostattoos for girlscross tattooseagle tattoosfoot tattoosscorpion tattookorona tattooscompass tattoocouple tattoosdiamond tattooshumba tattoocat tattooshenna tattooAnchor tattoostattoo yezisocute tattooszodiac zviratidzo zviratidzoAnkle TattoosFeather Tattooflower tattoosoctopus tattoorose tattoosbirds tattoosrip tattoosrudo tattoosmwedzi tattoostattoos kuvanhumehndi designtribal tattooslotus flower tattooshamwari yakanakisisa tattooselephant tattoo